आइसोलेसन बस्दा खाना र स्वास्थ्यमा कसरी ख्याल गर्ने ? - Gandak News
गण्डकन्यूज द्वारा ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:३९ मा प्रकाशित 0
गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ? चिकित्सकहरू गम्भीर समस्या देखिएका बाहेक लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिन्छन् । घरमै बस्दा खाना र सुरक्षाको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक रहेको चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।